Football Khabar » भाल्भर्डे ‘बर्खास्ती’बाट एक कदम टाढा !
भाल्भर्डे ‘बर्खास्ती’बाट एक कदम टाढा !
स्पेनिस बार्सिलोनाका प्रमुख प्रशिक्षक अर्नेस्टो भाल्भर्डेको पद यतिबेला धरापमा छन् । यो सिजन मध्यमस्तरको प्रदर्शन गरिरहेको बार्सिलोनालाई लयमा हिँडाउन नसकिरहेका उनको आलोचना गत सिजनबाटै हुँदै आएको छ । तर, उनी आजसम्म पनि टोली सम्हालिरहेका छन् ।
तर, अब भने उनको पद थप धरापमा परेको छ । तीन दिनअघि च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा समूह चरणअन्तर्गत चौथो खेलमा आफ्नो घरमा चेक क्लब स्लाभिया प्रहासँग गोलरहित बराबरीमा रोकिँदा बार्सिलोनाको थप आलोचना बढेको छ भने भाल्भर्डेको जागिर पनि संकटमा परेको छ ।
अब भने बार्सिलोनाले आफ्ना प्रशिक्षकको अवस्थाबारे सोच्न थालेको छ । बार्सिलोना निकट पत्रिका ‘मुन्डो डेपोर्टिभो’का अनुसार भाल्भर्डे अब आफ्नो बर्खास्तीबाट मात्रै एक कदम टाढा छन् । बार्सिलोनाले अन्तर्राष्ट्रिय ब्रेक हुनुअघि दुई खेल खेल्दैछ । आइतबार बिहान राति ला लिगामा आफ्नो घरमा सेल्टा भिगोसँग खेल्दैछ । त्यसपछि क्लब मैत्रीपूर्ण खेलमा कार्टागेनासँग खेल्दैछ । यदि सेल्टासँगको खेलमा पराजितभए बार्सिलोनाले भाल्भर्डेलाई पदमुक्त गर्ने तयारी गरेको छ ।
यी दुई खेलपछि अन्तर्राष्ट्रिय ब्रेक हुनेछ । र, त्यसअघि बार्सिलोना हालकै संघर्षपूर्ण अवस्थामा रहे क्लबले प्रशिक्षकलाई हटाएर नयाँ प्रशिक्षकको खोजी थाल्नेछ । खबरअनुसार पछिल्लोपटक बार्सिलोना स्लाभियासँग गोलरहित बराबरी खेलेपछि क्लबका अध्यक्ष र खेल निर्देशकबीच टिमको अवस्था र भाल्भर्डेको भविष्यबारे कुरा भएको बताइएको छ ।
प्रकाशित मिति २१ कार्तिक २०७६, बिहीबार १४:१७